प्रदेश अस्पतालका सबै कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा – Enayanepal.com
२०७८, २९ पुष बिहीबार मा प्रकाशित
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले अस्पतालका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कर्णाली प्रदेशका संयोजक अर्जुन पण्डितले अस्पतालका निर्देशक डा. डम्मर खड्कालाई बिमित गराउँदै बुधबारबाट कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् ।
झण्डै चार सय कर्मचारी रहेको अस्पतालले बिमा गर्दा बिमा बापतको ५० प्रतिशत शुल्क व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत कर्मचारीले व्यहोर्ने गरी कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले जानकारी दिए ।
पुष ३० गते सम्म सञ्चालन हुने विमा कार्यक्रम सकिए पछि स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरुले फागुन एक गतेबाट स्वास्थ्य बिमा मार्फत अस्पतालबाट सेवा लिन सक्ने स्वास्थ्य विमा बोर्डले बताएको छ । अस्पतालले बिमा गरिदिए पछि स्वास्थ्यकर्मी अन्य कर्मचारीहरु उत्साहित भएका छन् । बिरामीको सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरुको लागि बिमा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवामा थप सहज हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यस अघि नेपाल सरकारले २०७२ साल चैत्र २५ गते कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । हाल यो कार्यक्रम कर्णालीका १० वटा जिल्ला सहित देशका ७७ वटै जिल्लामा लागु भइसकेको छ । नेपाल सरकारले पाँच जना सम्मको परिवारलाई तिन हजार पाँच सय रुपैयाँमा सामुहिक स्वास्थ्य बिमा गराउँदै आएको छ ।